Home Wararka Sidee RW Rooble u arkay Doorashadii Kismaayo ee shalay
Sidee RW Rooble u arkay Doorashadii Kismaayo ee shalay
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay soo dhaweeyay doorashada maanta ka dhacday Magaalada Kismaayo ee lagu soo doortay afar ka mida Senatorada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya.
Doorashada Kismaayo ka dhacday shalay ayaa waxaa kusoo baxay Afar Senator oo kala ah; Iyaas Gabboose iyo Maxamed Axmed Sayid, halka Sharmaake Maxamed Cabdi oo kamid ahaa musharixiin
Ra’iisal Wasaaraha ayaa Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Guddiga Doorashada Heer Dowlad Goboleed Jubbaland ku ammaanay inay qabteen doorashada kuraastii ugu horeysay ee Aqalka Sare.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay inuu rajeynayo in doorashadan ay bilow u noqoto doorasho si hufan uga qabsoomta dalka.
Rooble ayaa yiri “Madaxweynaha iyo Guddiga Doorashooyinka Jubbaland waxaan ku ammaanayaa inay maanta qabteen doorashada kuraastii ugu horeysay ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Somaliya.
Hambalyo sidoo kale Senatorada la doortay, oo aan rajeynayo in doorashadoodu bilow u noqoto doorasho si hufan uga qabsoonta dalka.”
Jubaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreyey ee meesha ka saaray shaki kasta oo ku saabsan in dalka ay doorsho ka dhici weyso.